Norsomnews, Forfatter hos NorSom News
Weeraro waaweyn oo dhanka Internetka oo Norway lagu soo qaaday.
Norsomnews - 30. juni 2022
Erdogan: Sweden waxey balan-qaaday in 73 qof ay noo soo gacan-geliso
Erdogan oo wax walba oo uu rabay ka helay Sweden iyo Finland: 4 qodob.
Booliska Norway oo baajiyay kulan lagu gubi lahaa kitaabka quraanka ah.
Taksiile 7 bilood oo xabsi ah lagu xukumay, arrintan darteed.
Norsomnews - 29. juni 2022
Mohamed Nuur oo ugu danbeyn xabsiga laga sii daayay.
Ururada islaamka Norway oo cambaareeyay weerarkii toogashada Oslo.
Booliska Norway oo hubka qaadan doono.
Norsomnews - 26. juni 2022
Baarlamaanka EU oo aqbalay codsiga Ukraine.
Maxaa laga ogyahay Iiraaqiga ay boolisku u qabteen toogashadii Oslo.
Ninkii shanta(5) qof dilay oo lagu xukumay isbitaalka dhimirka: Wuu xanuunsanaa.
Norsomnews - 25. juni 2022
Booliska Oslo: 14 qof oo dhaawac ah ayaa isbitaalka loo qaaday.
Deg-deg: Labo(2) qof oo Oslo toogasho lagu dilay, dad kale oo dhaawac halis ah.
EU-da oo qarka u saaran ansixinta codsiga Ukraine ee midowga Yurub.
Norsomnews - 23. juni 2022
73.000 ajaaniib ah ayaa ka shaqeeyo shaqooyin aqoontooda ka hooseeyo.
Turkiga: Kaarkan ayaa dalkeena lagu soo gali karaa.
Norsomnews - 22. juni 2022